Mianoka amin’ny tsy fahaizana… | NewsMada
Mianoka amin’ny tsy fahaizana…
Eo amin’ny fanatanjahantena. Tsy mazava ary mbola manjavozavo amin’ny besinimaro ny fomba fitantanana sy ny politikam-pampandrosoana eo amin’ny fanatanjahantena malagasy amin’ny ankapobeny.
Tsy hita soritra mihitsy aloha, hatreto, izany fampandrosoana izany. Tsy hay intsony koa na mahafehy ny asany amin’ny maha mpitantana sy mpiahy ary mpifehy izany fanatanjahantena eto Madagasikara izany ireo olona napetraka eo amin’ny toerany ao amin’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena, etsy Ambohijatovo. Mbola sarotra ary tena sarotra ny haminavina izany.
Fomba fanao efa tany aloha ihany no mbola miverina amin’izao Repoblika fahefatra iainantsika izao. Vao mainka aza miha « dontofaisana », araka ny fiteny, ilay fomba fiasa, ankehitriny. Tsy misy na iray aza, angamba, mba mahafehy ny asa sahaniny ao amin’io departemanta iray io, manomboka any amin’ny minisitra izany ary mandalo amin’ireo tale isan-tsokajiny, sns.
Ho an’ny sôsialim-bahoaka. Toa zary lasa miteniteny foana ihany koa na/sy manao ny olona ho tsy mahay manao fanadahihadiana ka mampinana maloto vahoaka ve sanatria? Azo atao hoe minisitra ve ny olona mampinana maloto ny sarambabem-bahoaka toy izany? Isika rehetra ihany dia mahavaly izany fanontaniana kely izany. Tsy hita soritra izay vahaolana haroson’ireo minisiteran’ny Rano sy ny minisiteran’ny Angovo, izay misahana ny Jirama, mpamatsy rano. Tsy mbola nisy toy ny tamin’ity izany “rano fisotro maloto” izany, mifanohitra amin’ilay hirahiraina mandrakariva hoe “rano fisotro madio”. Eo ihany koa ny lafiny fampianarana izay mbola tsy marin-toerana, indrindra fa amin’ireo fampianarana ambony, sns. Mahay tokoa angamba ireo tompon’andraikitra ireo…
Ho an’ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Tsy mbola lefy hatramin’izay ka hatramin’izao ireo asan-jiolahy sy ny asan-dahalo. Eny fa na miezaka manadio ny tanàna hatrany aza ireo mpitandro filaminana, tsy mbola hita ihany koa ny vahaolana maharitra ny amin’izany sy ny fiparitahan’ireo basy isan-karazany sy mahery vaika. Tsy mbola nahitam-bahaolana ihany koa ny mikasika ny vidim-piainana tsy mitsaha-mitombo…
Fa ekena kosa anefa fa misy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tokony handravona izany rehetra izany. Sa tokoa ve mianoka amin’ny tsy fahaizana izy ireo?…